अन्तर्राष्ट्रिय Archives - NEPALI TV AUSTRALIA
काठमाडौं, २४ असोज । शुक्रबार भारत भ्रमणका लागि निस्किएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिफिङ शनिबार नेपाल आउँदैछन् । भारतमा उनको स्वागतका लागि भारत सरकारले विमानस्थलदेखि विभिन्न स्थानमा उनको तस्विर र चिनिया झन्डाले रंग्याएको छ ।भारतीय संचार माध्यमले सार्वजनिक गरेको तस्विरमा विद...
एजेन्सी । पाकिस्तानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो आकाश भएर हवाई यात्रा गर्न अनुमति नदिने बताएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेप्टेम्बर २१ मा अमेरिकाको यात्रामा निस्कँदै छन् । मोदी २२ सेप्टेम्बरमा ह्यूस्टनमा हुने ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रममा सहभ...
बीबीसी,अन्तर्राष्ट्रिय । साउदी अरेबियाका प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका हमलापछि अमेरिकी अधिकारीहरूले आफ्नो देशभित्र आपत्‌कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न भनि भण्डार गरिएका विशाल तेलको सञ्चितिलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्। तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति डोन...
काठमाडौं अमेरिकामा नेपालीहरु संलग्न अपराधका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। नेपालीहरु पक्राउ परेका अधिकांश घटना यौन र अपराधसँग जोडिएका छन्। सात सय पटक बलात्कार गरेको अभियोगमा तीन सय ३८ वर्ष जेल सजाय काटिरहेका नेपाली पनि अमेरिकी जेलमा छन्। उनी हुन्, जनकपुरका अजयकुमार देव।अ...
काठमाण्डौ । भारतकी पूर्वविदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अकल्पनिय निधनले भारत लगायत कुटनितिज्ञ नियोग समेत स्तब्ध बनेको छ । उनको उपचारको क्रममा गए राती स्थानीय समय अनुसार १२ बजे निधन भएको हो । अहिले स्वराजको निधन पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको प्रसांशा गर्दै ...
टेक्सास । अमेरिकाको टेक्सास राज्यको अल्पासोमा शनिबार भएको एक मास सुटिङमा कम्तिमा पनि २० जना मारिएका छन् भने २४ जना घाइते भएका छन् । घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एकजना २१ वर्षीय श्वेत युवा पक्राउ गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यो एक श्वेत-जातिवादी आतंक जस्तो देखिए पन...
एजेन्सी । भारतकी चर्चित नायिका शिल्पा सेट्टीको पतिको अरबपती हुन्। शिल्पा पतिले नेपाल बाट ब्यावसाय शुरु गरेर अहिले अरब भएका हुन् । राज कुन्द्रा देश विदेशमा कहलिएका व्यक्ति हुन् । तर, भारतमा उनलाई धेरैले बिजनेशम्यान भन्दा पनि शिल्पा सेट्टीको पतिको रुपमा परिचीत छन् । वि...
नाइजेरिया, नाइजेरियामा हवाइ जहाँज उड्नै लाग्दा एक व्यक्ति विमानको पखेटामा देखिएपछि विमानको उडान अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार लागोस सहरमा उक्त घटना भएको हो ।अधिकारीहरूका अनुसार विमान उड्न लाग्दा एक व्यक्ति धावन मार्गमा कुदेर आएका थिए। उनी छेउबाट विमानमा चढेर पखेटासम्म पु...
एजेन्सी । विश्वकै धनी व्यक्तिको नामले चिनिने माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक विल गेट्स हुन् । पछि एक अध्ययन प्रतिवेदनले बिल गेट्स र उनकी पत्नी मेलिण्डा गेट्स दुवै विश्वकै सबै भन्दा धनी जोडी बनेको देखाएको थियो ।सन् १९७५ मा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टका सह ...
महिलालाई अशक्त र अवला देख्ने पितृप्रधान समाजले प्राविधिक क्षेत्रमा महिलाको कुन स्तरसम्मको सफलता अपेक्ष गर्ला ? यस प्रकारको सफलतामा एक नेपाली महिलाले विकसित मुलुकका पुरुषहरुलाई समेत पछाडि पारेकी छन् भन्दा कतिलाई पत्यार लाग्ला ?डा. गुञ्जना शर्मालाई भेटेपछि सबैले यस सत्यला...